အိမျဖျောမလေး - Owl Myanmar News
OM | April 7, 2021 | Insect | No Comments
အိမျဖျောမလေး (စ/ဆုံး )
ကနြေျာ့နာမညျအောငျအောငျ။ တအိမျလုံးကအောငျလေးလို့ပဲချေါကွတယျ။ အိမျမှာ ဖဖေေ မမေေ ညီမလေး ကနြျော လေးယောကျအပွငျ အညာကအိမျဖျောမလေး သနျးသနျးရယျ ပေါငျး ၅ယောကျနထေိုငျတယျ။ ကနြေျာ့မိဘတှကေ ဈေးတခုမှာ ဖိုကျဘာပုဂံတှရေောငျးတယျ။ တရကျခရဈစမတျနဲ့ဥပုဒျ ဈေးနှဈရကျပိတျတဲ့နေ့ ကြိုကျထီးရိုးဘုရား ညအိပျသှားကွမယျပေါ့။ ဖွဈခငျြတော့ ၂၄ရကျညနမှော ဖြားပါလရေော့။ ၂၅ရကျမနကျစောစော တအိမျလုံးကြိုကျထီးရိုးသှားမယျ့အစီအစဉျကို အမကေ အဖအေ့ား “ရှငျတို့ပဲသှားကွတော့ ကမြ အောငျလေးကိုပွုစုဖို့နခေဲ့မယျ”ဆိုတော့ သနျးသနျးက “အနျတီလိုကျသှားပါ။ အသနျးနခေဲ့လိုကျမယျ။ မနှဈတုနျးကလဲ ကြိုကျထီးရိုးဘုရား အသနျးရောကျဖူးနပွေီပဲ။” သနျးသနျးဟာ စကားပွောရငျ အသနျး အသနျးလို့ပွောလရှေိ့တယျ။ အသနျးဟာ ကနြျောတို့အိမျကိုရောကျလာတော့ အသကျ၂၀ဝနျးကငျြပါ။ အသနျးက အခု အိမျမှာ ၁၀နှဈလောကျရှိပါပီ။ ကနြျောတို့မိသားစုလိုဖွဈနပေါတယျ။ ကနြျော ၁၀နှဈသားကတညျးက အသနျးအိမျကို ရောကျလာခဲ့တယျ။ အခုကနြေျာ့အသကျက ၂၀။ အသနျးအသကျက ၃၀လောကျပါ။ ဒီလိုနဲ့ ညနကေနြျောဆေးခနျးပွပွီးပွနျလာခဲ့တယျ။
ဆရာဝနျဆေးတလုံးထိုးပေးပွီး အိမျရောကျတော့ အိပျပြျောသှားတယျ။ နောကျရကျ ၂၅ရကျမနကျ ၄နာရီလောကျ အိမျရှကေ့ အသံတှကွေောငျ့ ကနြျောနိုးလာတယျ။ အမကေ “အသနျး အောငျလေးကို ဂရုစိုကျလိုကျနျော။ ညနေ မသကျသာရငျ ဆေးခနျးလိုကျပွလိုကျအုံး” ဆိုပွီး အမကေ အသနျးကို မှာနသေံကွားရတယျ။ ကနြျော မနညေ့က ဆရာဝနျရဲ့ဆေးတလုံးနဲ့တငျ နကေောငျးနပေါပီ။ ဒီလိုနဲ့ကနြျောလဲ ပွနျအိပျပြျောသှားခဲ့တယျ။ နိုးလာတော့ နာရီကွညျ့လိုကျတော့ ၈နာရီ။ ကနြျောလဲရခြေိုးခနျးသှား မကျြနှာသဈပွီး ပွနျအလာ. အသနျးအခနျးရှကေ့ဖွတျအလြှောကျ အမှတျမထငျအသနျးအခနျးထဲလှမျးကွညျ့မိတယျ။ အသနျးရဲ့ ထမီဟာ ဒူးဆဈအထကျနားရောကျနတေယျ။ ဖွူဝငျးတဲ့ခွသေလုံးသားတှကေို အတိုငျးသားမွငျနရေတယျ။ သနျးသနျက အညာသူ။ ရုပျရညျကလဲရှကျကွမျးရညျကြို. ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျကလဲ မိနျးမတယောကျရှိသငျ့ရှိထိုကျတာထကျ ဘာမှမပို။ ဒါပမေယျ့ အသနျးမှာစှဲမကျစရာတခုတော့ရှိတယျ။ အဲဒါက ဖွူဝငျးတဲ့အသားအရညျပဲ။ အညာကရောကျခါစ အသားကညိုညကျညကျဆိုပမေယျ့ ရနျကုနျကိုရောကျလာတာ ၁၀နှဈနီးနီးဆိုတော့ အသနျးအသားအရညျဟာ ရနျကုနျသူတှထေကျလှပတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကနြျောလဲ အသနျးအခနျးထဲခွသေံဖှဖှနငျးပွီးဝငျလာခဲ့တယျ။ အသနျးကတော့ အိပျပြျောနဆေဲ။ ဒီလိုနဲ့ကနြေျာ့စိတျရိုငျးတှဝေငျလာပွီး အသနျးထမီလေးကို အသာအယာ မတငျလိုကျတယျ။ ကွညျ့စမျးဗြာ အိမျဖျောမလေးအသနျးရဲ့ ပေါငျသားတှဟော ဝါဝငျးနူးညကျနတေယျ။
ကနြျော အသနျးခန်ဓာကိုယျနားကပျလိုကျတော့ လကျဈ ဆပျပွာအနံ့ကို ရှုရှိုကျလိုကျမိတယျ။ အခုမှသတိရမိတယျ။ အသနျးဟာ မနကျစောစောထ ရခြေိုးတဲ့အကငျြ့ရှိတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ အသနျးထမီကို ရငျခေါငျးပျေါထိ ညငျညငျသာပငျ့တငျလိုကျတော့ ဝါဝငျးတဲ့ပေါငျနှဈလုံးနဲ့အတူ အသနျးစောကျပကျလေးဟာ ခပျဟဟလေးဖွဈနတောတှရေ့တော့ ကနြေျာ့စိတျတှဘေယျလိုမှထိနျးမရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုယျကိုရှကေို့ငျးပွီး အသနျးစောကျစိလေးကို လြှာထိပျလေးနဲ့ကလိပေးနမေိတယျ။ မကွာခငျ အသနျးနိုးလာပွီး ငေါကျခနဲထထိုငျကာ “ဟငျ… အောငျလေး မငျးအသနျးအခနျးထဲဝငျ ဘာလုပျတာလဲ”လို့ ဒေါသသံနဲ့အမေး ကနြျောဟာ လငျြမွနျစှာ အသနျးကို တှနျးလှဲလိုကျပွီး အသနျးကိုယျပျေါခှတကျပီး အသနျးနှုတျခမျးတှကေို စုပျလိုကျတယျ။ လကျတဖကျကလဲ အသနျးနို့တှကေို ခပျကွမျးကွမျးခလြေိုကျတယျ။ အသနျးဟာ အောကျကနရေုံးကနျပမေယျ့ အသကျ၂၀သနျသနျမာမာ ယောကျြားတယောကျ ခှနျအားကိုတော့မယှဉျနိုငျခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကနြျောဟာ အသနျးရဲ့အင်ျကြီကွယျသီးတှကေိုဖွုတျရငျး အသနျးရဲ့နို့သီးခေါငျးလေးကို လြှာနဲ့ကလိ လကျတဖကျကလဲ အခွားနို့တလုံးကို ညငျညငျသာသာခပြေေးနတေယျ။ မကွာခငျ အသနျးဟာ တအငျးအငျးညညျးညူပွီး “အောငျလေး အသနျးမနတေတျတော့ဘူးကှာ လုပျမှာဖွငျ့ လုပျတော့”ဆိုတော့ ကနြျောလဲအဝတျတှခြှေတျလိုကျတော့ အသနျးဟာ ထောငျမတျနတေဲ့ကနြေျာ့လီးကို တအံ့တသွကွညျ့နတေယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀နှဈက မိမိရခြေိုးပေးခဲ့ရတဲ့ကလေးတယောကျလီးဟာ ဆယျနှဈအတှငျးမှာ ဒီလောကျကွီးထှားလာမယျလို့ အသနျးမထငျခဲ့ဘူး။ ကွညျ့စမျးပါအုံး။ အရှညျက ၇လကျမကြျော လုံးပတျက မိမိလကျကောကျဝတျလောကျရှိတယျ။ ဒီလီးနဲ့ အလိုးခံရတော့မှာလားလို့တှေးရငျး အသနျးတယောကျ ရငျခုနျသလို ကွောကျသလို ဖွဈနမေိတယျ။ တကယျတော့ လှနျခဲ့တဲ့သုံးလလောကျကတညျးက အောငျလေးဟာ ဗိုလျခြုပျဈေးအတှငျးက ဆေးဆိုငျကနေ လိငျကငျြ့ဆကျတခုဝယျပီး အခနျးထဲမှာ မနကျတခါ ညတခါလကေ့ငျြ့ခဲ့တာ မသနျးမသိရှာဘူး။ အောငျလေးဟာ မိမိလီးကွီးကို ကိုငျပွီး အသနျးစောကျဖုတျဝကိုတပွေီ့း ဖိခလြိုကျတယျ။ ဗဈြဗဈြဗဈြအသံနဲ့အတူ အသနျးလကျနှဈဖကျဟာ အောငျလေးပုခုံးနှဈခုလုံးကို စုပျကိုငျမိတယျ။ အောငျလေးလဲလီးကိုပွနျအထုတျ အောငျလေးလီးတံတလြှောကျ မသနျးရဲ့သှေးစတှဟော ပကြေံနတေယျ။ အခကျြ ၃၀လောကျအသှငျးအထုတျလုပျပီးမှာ မသနျးခါးလေး ကော့ကော့တကျလာပွီး “ကောငျးလိုကျတာ အောငျလေးရယျ။”ပါးစပျကပွောရငျး အောငျလေးမကျြနှာကို လကျနှဈဖကျနဲ့လှမျးဆှဲရငျး နှုတျခမျးတှကေို နမျးစုပျနတေယျ။ နောကျထပျအခကျြ ၂၀လောကျဆောငျ့အပွီးမှာ အောငျလေးရဲ့ သုတျရညျတှဟော အသနျးစောကျခေါငျးကဉျြးကဉျြးထဲကနေ လြှံထှကျလာတယျ။ အောငျလေးလဲ ခဏနားပွီးနောကျတခြီဆကျလိုးအပွီးမှာ မောဟိုကျမှုနဲ့အတူ အသနျးကိုယျပျေါမှောကျလြှကျ အိပျပြျောသှားတယျ။
မညျမြှကွာအောငျ အိပျပြျောသှားသညျမသိ။ နာရီကွညျ့လိုကျတော့ ၁နာရီထိုးနပွေီ။ အသနျးကိုမတှတေ့ာနဲ့ အောငျလေးလဲလူးလဲထပွီး ထမငျးစားခနျးထဲသှားမှ အသနျးက “မောငျ… ရခြေိုးလေ။ ပွီးမှထမငျးစားပေါ့”တဲ့ အောငျလေးလဲ “မ… ထမငျးအရငျစားမယျ။ ထမငျးစားပွီး ပွနျအိပျအုံးမယျ။ အိပျရေးမဝသေးဘူး။ မ ။ ညနရေောကျမှ ရခြေိုးတော့မယျ” ဆိုတော့ မောငျ့သဘောဆိုပွီး ထမငျးပွငျပေးတယျ။ အောငျလေးထမငျးစားအပွီးမှာ အသနျးဟာ ရခေဲသတ်ေတာထဲက အအေးခှကျထုတျပီး အောငျလေးရှခေ့ပြေးတယျ။ အောငျလေးလဲအထူးအဆနျးဖွဈနမေိတယျ။ ဟုတျတယျလေ အသနျးအိမျရောကျတဲ့ ၁၀နှဈအတှငျးမှာ တခါမှထမငျးစားပီး အအေးမဖြျောပေးခဲ့ဘူး။ အောငျလေးလဲ အအေးခှကျကိုယူသောကျလိုကျတော့ ခြိုခဉျြခဉျြအရသာ ခံစားမိတာနဲ့ “မ ဒါဘာဖြျောရညျလဲ” မောငျ အဲ့ဒါ ပြားရညျ ကွကျဥ သံပုရာ သုံးမြိုးပေါငျးထားတဲ့ဖြျောရညျလေ။ မနှဈက အညာကလကျဆောငျရတဲ့ပြားရညျ. ဒီအတိုငျးထားထားတာ။ အခုမှအသုံးဝငျတော့တယျ။ အောငျလေးလဲပွုံးလိုကျမိတယျ။ အသနျးနားကပျရငျး ပါးလေးကိုကွငျကွငျနာနာနမျးရငျ “မောငျ ညမှအသနျးကို တညလုံးလိုးမယျနျော။ အခုတော့ မောငျတရေးအိပျပီး အားမှေးလိုကျအုံးမယျ” ဆိုပီး အခနျးထဲဝငျအိပျလိုကျသညျ။ တရေးနိုးတော့ ညနစေောငျးနပွေီ။ လူဟာလဲ လနျးလနျးဆနျးဆနျးဖွဈလာတယျ။ အောငျလေးလဲ အင်ျကြီခြှတျပွီး ရခြေိုးခနျးထဲဝငျရခြေိုး ပဈလိုကျမှ ပုခုံးဟာ စပျဖငျြးဖငျြးဖွဈတော့မှ ကွညျ့လိုကျရာ မနကျက အသနျးကိုလိုးတော့ အသနျးဟာ မိမိလီးရဲ့နာကငျြမှုကွောငျ့ မိမိပုခုံးကို တအားညှဈတော့ အသနျးလကျသညျးတှကွေောငျ့ ဒဏျရာရပီး စပျဖငျြးဖငျြးဖွဈနတော သိရတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈမနကျက အသနျးကိုလိုးတာကို သတိရရငျးပီတိဖွဈနမေိတယျ။ ဟုတျတယျလေ။ အသနျးရဲ့ ပါကငျကို မိမိဖှငျ့လိုကျရတဲ့အရသာ နောကျပီး ဒီညတညလုံး အသနျးကို စိတျကွိုကျလိုးရအုံးမယျဆိုတဲ့ အတှေးဟာ အောငျလေးရငျကို တလှပျလှပျနဲ့ပေါ့။
ရခြေိုး အဝတျလဲပွီး အခနျးရှအေ့ရောကျ အသနျးနဲ့အတှမှေ့ာ “မောငျအပွငျခဏသှားအုံးမယျ မ” ဆိုတော့ အသနျးဟာ ကနြေျာ့ပါးကိုနမျးရငျး “မကွာနဲ့နျော မောငျ။ မ စောငျ့နမေယျ”တဲ့။ တကယျတော့ ညနညေနမှော ကနြျော ဘီယာသောကျတာ အသနျးသိနတေယျ။ အခုလဲ ဘီယာဆိုငျသှားမှာသိတဲ့ အသနျးက မကွာနဲ့နျောလို့မှာခွငျးဖွဈပါတယျ။ အောငျလေးလဲ လမျးထိပျရောကျတော့ ဆေးဆိုငျဝငျပွီး အီးဇီးတူး တကဒျဝယျခဲ့တယျ။ ဒီနောကျ မိမိထိုငျနကွေ ဘီယာဆိုငျရောကျတော့ ဘီယာလေးခှကျ. ဝီတပွား ငါးရှဥျ့ခွောကျစပျတပှဲ ပါဆယျဆှဲပွီး အိမျပွနျလာခဲ့တယျ။ အိမျရောကျတော့ အသနျးက ဆီးကွိုပွီး “မောငျ ထမငျးစားခနျးထဲပွငျလိုကျမယျ”ဆိုတော့ ကနြျောက “ရတယျ မ ဧညျ့ခနျးမှာပဲပွငျလိုကျ” ဆိုတော့ အသနျးဟာ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ကကြနြနပွငျဆငျပေးရှာတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကနြျောလဲ ဘီယာ ဝီစကီရောစပျပွီး တငုံသောကျလိုကျ ငါးရှဥျ့ခွောကျစပျဝါးလိုကျနဲ့ ဇရပျမငျးစီးဇိမျ တှနေ့တေယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဘီယာ ဝီစကီတဝကျကုနျခြိနျမှာ “မ… ကနြေျာ့အခနျးထဲက လကျတော့ကှနျပြူတာ ယူခဲ့ပေးပါ” ဆိုတော့ အသနျးဟာ အခနျးထဲဝငျ ကှနျပြူတာယူလာပွီး ကနြေျာ့ဘေးဝငျထိုငျလိုကျတယျ။ ကနြျော ကှနျပြူတာဖှငျ့ပွီး ဇာတျကားပွတော့ အသနျးဟာ ဇာတျကားကို မမှိတျမသုနျစိုကျကွညျ့နတေယျ။ ဇာတျကားထဲမှာ အသကျ၅၀ကြျောအမြိုးသမီးကွီး အသကျ၂၀ကောငျလေးတယောကျရဲ့ လီးကို အငမျးမရစုပျနတေယျ။ အသနျးက “ကောငျလေးက ငယျငယျလေးရယျနျော။ “ဟုတျတယျ မ’ သူတို့နိုငျငံမှာ ကာမဆကျစပျဖို့ဆို အသကျအရှယျမရှေးဘူး။ တခါတလေ အသကျ၆၀အဖိုးကွီးတှနေဲ့ ၁၃နှဈကောငျမလေးတှလေဲ လိုးကွတာပဲ။ “ကနြျောပွောရငျး မ… မောငျ့ကို အဲ့ဒီဗှီဒီယိုထဲကလိုလုပျပေးလေ။ အသနျးလဲ ခေါငျးလေးညိမျ့ရှာတယျ။
ကနြျောလဲ အဝတျအစားတှခြှေတျပီး ဆိုဖာပျေါထိုငျနတေုနျး အသနျးဟာ ကနြေျာ့ရှေ့ ဒူးပဆဈတုပျထိုငျရငျး ကနြေျာ့လီးကို မှုတျပေးတယျ။ ကွညျ့စမျး အသနျးဟာ မှတျဉာဏျတအားကောငျးတာပဲ။ ကနြေျာ့လီကို ဗှီဒီယိုထဲက အမြိုးသမီးကွီးအတိုငျး လီးထိပျနဲ့လီးဒဈတှကေို သူမလြှာလေးနဲ့ လိပျလိပျပီး ပလှမှေုတျပေးနတေယျ။ တခါတခါ ကနြျော ကိုယျ့ခန်ဓာမွောကျတကျသှားပွီး ၁၅ မိနဈအကွာမှာ ကနြေျာ့သုတျရညျတှဟော အသနျးအာခေါငျထဲပနျးထုတျလိုကျတယျ။ ပထမတော့ အသနျးဟာ မကျြလုံးပွူးပွီး ကနြျောကိုမော့ကွညျ့တော့ “မ ကနြေျာ့သုတျရညျတှမွေိုခလြိုကျ။ ဘာမှမဖွဈဘူးဆိုမှ” အသနျးဟာ မကျြစိမှိတျပွီး ကနြေျာ့သုတျရညျတှကေို မွိုခလြိုကျတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကနြျောဟာ အသနျးအင်ျကြီကိုခြှတျပေးရငျး အသနျးကို ဆိုဖာရှညျပျေါလှဲသိပျလိုကျတယျ။ အသနျးရဲ့ ခွထေောကျတခြောငျးကို ဆိုဖာလကျတနျးပျေါတငျ. အခွားခွထေောကျတခြောငျးကို ဆိုဖာဘေးတှဲလောငျးခလြိုကျတယျ။ ဒီနောကျ ကနြျောဟာ ဝမျးရားမှောကျပွီး အသနျးစောကျဖုတျလေးကို ဘာဂြာပေးနတေယျ။ အသနျးစောကျစိလေးကို လြှာနဲ့ကလိလိုကျ. တခါတခါလကျကလေးနဲ့ဖွဲပီး စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေို လြှာနဲ့အလြားလိုကျ လကျြပေးနမေိတယျ။
မကွာခငျ အသနျးဖငျလေး ကော့ကော့တကျလာရငျး ပါးစပျကလဲ “ကောငျးလိုကျတာမောငျရယျ။ မ နှဈခါတောငျပွီးသှားပွီ” ပွောပီးခြိနျ အသနျးစောကျဖုတျထဲက စောကျရညျတှစေီးကလြာတော့ ကနြျောဟာ လြှာလေးနဲ့ သိမျးလကျြရငျး အသနျးစောကျရညျတှကေို မွိုခလြိုကျတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကနြျောနဲ့အသနျးဟာ ဧညျ့ခနျးဆိုဖာရှညျပျေါ တညလုံးလိုးဖွဈကွတယျ။ မနကျလေးနာရီရောကျမှ အလိုးရပျပီး ကနြျောဟာ မသနျးစောကျဖုတျလေးထဲ ကနြေျာ့လီးကွီးဆိမျရငျး အိပျပြျောသှားတယျ။ မနကျ၆နာရီမှာ နှဈယောကျသားနိုးလာပွီး ဧညျ့ခနျးထဲကပစ်စညျးတှေ ရှငျးလငျးပီး နှဈယောကျအတူ ရခြေိုးခနျးထဲဝငျပွီး ထပျလိုးကွပွနျတယျ။ ရခြေိုးအပွီး အခနျးထဲကအထှကျ အသနျးဟာ ကနြေျာ့နှုတျခမျးကိုစုပျရငျး “မောငျ မ’နဲ့ နတေိုငျးလိုးကွမယျနျော”တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ကနြျောအဝတျစားလဲပွီး အသနျးအခနျးထဲဝငျပွီး “မ ရော့။ ဒီဆေးကဒျထဲက ဆေးနှဈလုံး ခဏနရေငျသောကျလိုကျအုံး” ဆိုတော့ အသနျးက “မောငျ အဲ့ဒါဘာဆေးလဲ” ကနြျောက မ’ ဒါ အီးဇီးတူး လို့ချေါတယျ။ မနဲ့မောငျလိုးပွီး ၇၂နာရိ အတှငျး မ’ဒီဆေးသောကျရငျ ဗိုကျမကွီးတော့ဘူး။ ဆိုတော့ “ဟငျ ဒါဆို မောငျနဲ့မ မယူဘဲနဲ့လဲ တသကျလုံးလိုးလို့ရတာပေါ့နျော” ဆိုပွီး အသနျးဟာ ဆေးကဒျထဲက ဆေး၂လုံးကိုဖောကျပီး ပါးစပျထဲပဈထညျ့လိုကျရငျး အနီးကရဘေူးကို ယူပွီးသောကျခလြိုကျတယျ။ တဆကျထဲမှာပဲ “မောငျ … မကို မယူလဲ မောငျ့တသကျ မကိုလိုးပေးပါနျော”တဲ့။ပွီး…..
အိမ်ဖော်မလေး (📳 စ/ဆုံး )
ကျနော့်နာမည်အောင်အောင်။ တအိမ်လုံးကအောင်လေးလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။ အိမ်မှာ ဖေဖေ မေမေ ညီမလေး ကျနော် လေးယောက်အပြင် အညာကအိမ်ဖော်မလေး သန်းသန်းရယ် ပေါင်း ၅ယောက်နေထိုင်တယ်။ ကျနော့်မိဘတွေက ဈေးတခုမှာ ဖိုက်ဘာပုဂံတွေရောင်းတယ်။ တရက်ခရစ်စမတ်နဲ့ဥပုဒ် ဈေးနှစ်ရက်ပိတ်တဲ့နေ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ညအိပ်သွားကြမယ်ပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ၂၄ရက်ညနေမှာ ဖျားပါလေရော့။ ၂၅ရက်မနက်စောစော တအိမ်လုံးကျိုက်ထီးရိုးသွားမယ့်အစီအစဉ်ကို အမေက အဖေ့အား “ရှင်တို့ပဲသွားကြတော့ ကျမ အောင်လေးကိုပြုစုဖို့နေခဲ့မယ်”ဆိုတော့ သန်းသန်းက “အန်တီလိုက်သွားပါ။ အသန်းနေခဲ့လိုက်မယ်။ မနှစ်တုန်းကလဲ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား အသန်းရောက်ဖူးနေပြီပဲ။” သန်းသန်းဟာ စကားပြောရင် အသန်း အသန်းလို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ အသန်းဟာ ကျနော်တို့အိမ်ကိုရောက်လာတော့ အသက်၂၀ဝန်းကျင်ပါ။ အသန်းက အခု အိမ်မှာ ၁၀နှစ်လောက်ရှိပါပီ။ ကျနော်တို့မိသားစုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော် ၁၀နှစ်သားကတည်းက အသန်းအိမ်ကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ အခုကျနော့်အသက်က ၂၀။ အသန်းအသက်က ၃၀လောက်ပါ။ ဒီလိုနဲ့ ညနေကျနော်ဆေးခန်းပြပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။
ဆရာဝန်ဆေးတလုံးထိုးပေးပြီး အိမ်ရောက်တော့ အိပ်ပျော်သွားတယ်။ နောက်ရက် ၂၅ရက်မနက် ၄နာရီလောက် အိမ်ရှေ့က အသံတွေကြောင့် ကျနော်နိုးလာတယ်။ အမေက “အသန်း အောင်လေးကို ဂရုစိုက်လိုက်နော်။ ညနေ မသက်သာရင် ဆေးခန်းလိုက်ပြလိုက်အုံး” ဆိုပြီး အမေက အသန်းကို မှာနေသံကြားရတယ်။ ကျနော် မနေ့ညက ဆရာဝန်ရဲ့ဆေးတလုံးနဲ့တင် နေကောင်းနေပါပီ။ ဒီလိုနဲ့ကျနော်လဲ ပြန်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ နိုးလာတော့ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၈နာရီ။ ကျနော်လဲရေချိုးခန်းသွား မျက်နှာသစ်ပြီး ပြန်အလာ. အသန်းအခန်းရှေ့ကဖြတ်အလျှောက် အမှတ်မထင်အသန်းအခန်းထဲလှမ်းကြည့်မိတယ်။ အသန်းရဲ့ ထမီဟာ ဒူးဆစ်အထက်နားရောက်နေတယ်။ ဖြူဝင်းတဲ့ခြေသလုံးသားတွေကို အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ သန်းသန်က အညာသူ။ ရုပ်ရည်ကလဲရွက်ကြမ်းရည်ကျို. ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလဲ မိန်းမတယောက်ရှိသင့်ရှိထိုက်တာထက် ဘာမှမပို။ ဒါပေမယ့် အသန်းမှာစွဲမက်စရာတခုတော့ရှိတယ်။ အဲဒါက ဖြူဝင်းတဲ့အသားအရည်ပဲ။ အညာကရောက်ခါစ အသားကညိုညက်ညက်ဆိုပေမယ့် ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတာ ၁၀နှစ်နီးနီးဆိုတော့ အသန်းအသားအရည်ဟာ ရန်ကုန်သူတွေထက်လှပတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်လဲ အသန်းအခန်းထဲခြေသံဖွဖွနင်းပြီးဝင်လာခဲ့တယ်။ အသန်းကတော့ အိပ်ပျော်နေဆဲ။ ဒီလိုနဲ့ကျနော့်စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာပြီး အသန်းထမီလေးကို အသာအယာ မတင်လိုက်တယ်။ ကြည့်စမ်းဗျာ အိမ်ဖော်မလေးအသန်းရဲ့ ပေါင်သားတွေဟာ ဝါဝင်းနူးညက်နေတယ်။
ကျနော် အသန်းခန္ဓာကိုယ်နားကပ်လိုက်တော့ လက်စ် ဆပ်ပြာအနံ့ကို ရှုရှိုက်လိုက်မိတယ်။ အခုမှသတိရမိတယ်။ အသန်းဟာ မနက်စောစောထ ရေချိုးတဲ့အကျင့်ရှိတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ အသန်းထမီကို ရင်ခေါင်းပေါ်ထိ ညင်ညင်သာပင့်တင်လိုက်တော့ ဝါဝင်းတဲ့ပေါင်နှစ်လုံးနဲ့အတူ အသန်းစောက်ပက်လေးဟာ ခပ်ဟဟလေးဖြစ်နေတာတွေ့ရတော့ ကျနော့်စိတ်တွေဘယ်လိုမှထိန်းမရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုယ်ကိုရှေ့ကိုင်းပြီး အသန်းစောက်စိလေးကို လျှာထိပ်လေးနဲ့ကလိပေးနေမိတယ်။ မကြာခင် အသန်းနိုးလာပြီး ငေါက်ခနဲထထိုင်ကာ “ဟင်… အောင်လေး မင်းအသန်းအခန်းထဲဝင် ဘာလုပ်တာလဲ”လို့ ဒေါသသံနဲ့အမေး ကျနော်ဟာ လျင်မြန်စွာ အသန်းကို တွန်းလှဲလိုက်ပြီး အသန်းကိုယ်ပေါ်ခွတက်ပီး အသန်းနှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်လိုက်တယ်။ လက်တဖက်ကလဲ အသန်းနို့တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းချေလိုက်တယ်။ အသန်းဟာ အောက်ကနေရုံးကန်ပေမယ့် အသက်၂၀သန်သန်မာမာ ယောက်ျားတယောက် ခွန်အားကိုတော့မယှဉ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဟာ အသန်းရဲ့အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်ရင်း အသန်းရဲ့နို့သီးခေါင်းလေးကို လျှာနဲ့ကလိ လက်တဖက်ကလဲ အခြားနို့တလုံးကို ညင်ညင်သာသာချေပေးနေတယ်။ မကြာခင် အသန်းဟာ တအင်းအင်းညည်းညူပြီး “အောင်လေး အသန်းမနေတတ်တော့ဘူးကွာ လုပ်မှာဖြင့် လုပ်တော့”ဆိုတော့ ကျနော်လဲအဝတ်တွေချွတ်လိုက်တော့ အသန်းဟာ ထောင်မတ်နေတဲ့ကျနော့်လီးကို တအံ့တသြကြည့်နေတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်က မိမိရေချိုးပေးခဲ့ရတဲ့ကလေးတယောက်လီးဟာ ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ ဒီလောက်ကြီးထွားလာမယ်လို့ အသန်းမထင်ခဲ့ဘူး။ ကြည့်စမ်းပါအုံး။ အရှည်က ၇လက်မကျော် လုံးပတ်က မိမိလက်ကောက်ဝတ်လောက်ရှိတယ်။ ဒီလီးနဲ့ အလိုးခံရတော့မှာလားလို့တွေးရင်း အသန်းတယောက် ရင်ခုန်သလို ကြောက်သလို ဖြစ်နေမိတယ်။ တကယ်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလလောက်ကတည်းက အောင်လေးဟာ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအတွင်းက ဆေးဆိုင်ကနေ လိင်ကျင့်ဆက်တခုဝယ်ပီး အခန်းထဲမှာ မနက်တခါ ညတခါလေ့ကျင့်ခဲ့တာ မသန်းမသိရှာဘူး။ အောင်လေးဟာ မိမိလီးကြီးကို ကိုင်ပြီး အသန်းစောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ပြီး ဖိချလိုက်တယ်။ ဗျစ်ဗျစ်ဗျစ်အသံနဲ့အတူ အသန်းလက်နှစ်ဖက်ဟာ အောင်လေးပုခုံးနှစ်ခုလုံးကို စုပ်ကိုင်မိတယ်။ အောင်လေးလဲလီးကိုပြန်အထုတ် အောင်လေးလီးတံတလျှောက် မသန်းရဲ့သွေးစတွေဟာ ပေကျံနေတယ်။ အချက် ၃၀လောက်အသွင်းအထုတ်လုပ်ပီးမှာ မသန်းခါးလေး ကော့ကော့တက်လာပြီး “ကောင်းလိုက်တာ အောင်လေးရယ်။”ပါးစပ်ကပြောရင်း အောင်လေးမျက်နှာကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့လှမ်းဆွဲရင်း နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းစုပ်နေတယ်။ နောက်ထပ်အချက် ၂၀လောက်ဆောင့်အပြီးမှာ အောင်လေးရဲ့ သုတ်ရည်တွေဟာ အသန်းစောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းထဲကနေ လျှံထွက်လာတယ်။ အောင်လေးလဲ ခဏနားပြီးနောက်တချီဆက်လိုးအပြီးမှာ မောဟိုက်မှုနဲ့အတူ အသန်းကိုယ်ပေါ်မှောက်လျှက် အိပ်ပျော်သွားတယ်။
မည်မျှကြာအောင် အိပ်ပျော်သွားသည်မသိ။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၁နာရီထိုးနေပြီ။ အသန်းကိုမတွေ့တာနဲ့ အောင်လေးလဲလူးလဲထပြီး ထမင်းစားခန်းထဲသွားမှ အသန်းက “မောင်… ရေချိုးလေ။ ပြီးမှထမင်းစားပေါ့”တဲ့ အောင်လေးလဲ “မ… ထမင်းအရင်စားမယ်။ ထမင်းစားပြီး ပြန်အိပ်အုံးမယ်။ အိပ်ရေးမဝသေးဘူး။ မ ။ ညနေရောက်မှ ရေချိုးတော့မယ်” ဆိုတော့ မောင့်သဘောဆိုပြီး ထမင်းပြင်ပေးတယ်။ အောင်လေးထမင်းစားအပြီးမှာ အသန်းဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲက အအေးခွက်ထုတ်ပီး အောင်လေးရှေ့ချပေးတယ်။ အောင်လေးလဲအထူးအဆန်းဖြစ်နေမိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ အသန်းအိမ်ရောက်တဲ့ ၁၀နှစ်အတွင်းမှာ တခါမှထမင်းစားပီး အအေးမဖျော်ပေးခဲ့ဘူး။ အောင်လေးလဲ အအေးခွက်ကိုယူသောက်လိုက်တော့ ချိုချဉ်ချဉ်အရသာ ခံစားမိတာနဲ့ “မ ဒါဘာဖျော်ရည်လဲ” မောင် အဲ့ဒါ ပျားရည် ကြက်ဥ သံပုရာ သုံးမျိုးပေါင်းထားတဲ့ဖျော်ရည်လေ။ မနှစ်က အညာကလက်ဆောင်ရတဲ့ပျားရည်. ဒီအတိုင်းထားထားတာ။ အခုမှအသုံးဝင်တော့တယ်။ အောင်လေးလဲပြုံးလိုက်မိတယ်။ အသန်းနားကပ်ရင်း ပါးလေးကိုကြင်ကြင်နာနာနမ်းရင် “မောင် ညမှအသန်းကို တညလုံးလိုးမယ်နော်။ အခုတော့ မောင်တရေးအိပ်ပီး အားမွေးလိုက်အုံးမယ်” ဆိုပီး အခန်းထဲဝင်အိပ်လိုက်သည်။ တရေးနိုးတော့ ညနေစောင်းနေပြီ။ လူဟာလဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လာတယ်။ အောင်လေးလဲ အင်္ကျီချွတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ရေချိုး ပစ်လိုက်မှ ပုခုံးဟာ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်တော့မှ ကြည့်လိုက်ရာ မနက်က အသန်းကိုလိုးတော့ အသန်းဟာ မိမိလီးရဲ့နာကျင်မှုကြောင့် မိမိပုခုံးကို တအားညှစ်တော့ အသန်းလက်သည်းတွေကြောင့် ဒဏ်ရာရပီး စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်နေတာ သိရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်က အသန်းကိုလိုးတာကို သတိရရင်းပီတိဖြစ်နေမိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ အသန်းရဲ့ ပါကင်ကို မိမိဖွင့်လိုက်ရတဲ့အရသာ နောက်ပီး ဒီညတညလုံး အသန်းကို စိတ်ကြိုက်လိုးရအုံးမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဟာ အောင်လေးရင်ကို တလှပ်လှပ်နဲ့ပေါ့။
ရေချိုး အဝတ်လဲပြီး အခန်းရှေ့အရောက် အသန်းနဲ့အတွေ့မှာ “မောင်အပြင်ခဏသွားအုံးမယ် မ” ဆိုတော့ အသန်းဟာ ကျနော့်ပါးကိုနမ်းရင်း “မကြာနဲ့နော် မောင်။ မ စောင့်နေမယ်”တဲ့။ တကယ်တော့ ညနေညနေမှာ ကျနော် ဘီယာသောက်တာ အသန်းသိနေတယ်။ အခုလဲ ဘီယာဆိုင်သွားမှာသိတဲ့ အသန်းက မကြာနဲ့နော်လို့မှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လေးလဲ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ဆေးဆိုင်ဝင်ပြီး အီးဇီးတူး တကဒ်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ဒီနောက် မိမိထိုင်နေကြ ဘီယာဆိုင်ရောက်တော့ ဘီယာလေးခွက်. ဝီတပြား ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်တပွဲ ပါဆယ်ဆွဲပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ အသန်းက ဆီးကြိုပြီး “မောင် ထမင်းစားခန်းထဲပြင်လိုက်မယ်”ဆိုတော့ ကျနော်က “ရတယ် မ ဧည့်ခန်းမှာပဲပြင်လိုက်” ဆိုတော့ အသန်းဟာ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ကျကျနနပြင်ဆင်ပေးရှာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်လဲ ဘီယာ ဝီစကီရောစပ်ပြီး တငုံသောက်လိုက် ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်ဝါးလိုက်နဲ့ ဇရပ်မင်းစီးဇိမ် တွေ့နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘီယာ ဝီစကီတဝက်ကုန်ချိန်မှာ “မ… ကျနော့်အခန်းထဲက လက်တော့ကွန်ပျူတာ ယူခဲ့ပေးပါ” ဆိုတော့ အသန်းဟာ အခန်းထဲဝင် ကွန်ပျူတာယူလာပြီး ကျနော့်ဘေးဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ ကျနော် ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး ဇာတ်ကားပြတော့ အသန်းဟာ ဇာတ်ကားကို မမှိတ်မသုန်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာ အသက်၅၀ကျော်အမျိုးသမီးကြီး အသက်၂၀ကောင်လေးတယောက်ရဲ့ လီးကို အငမ်းမရစုပ်နေတယ်။ အသန်းက “ကောင်လေးက ငယ်ငယ်လေးရယ်နော်။ “ဟုတ်တယ် မ’ သူတို့နိုင်ငံမှာ ကာမဆက်စပ်ဖို့ဆို အသက်အရွယ်မရွေးဘူး။ တခါတလေ အသက်၆၀အဖိုးကြီးတွေနဲ့ ၁၃နှစ်ကောင်မလေးတွေလဲ လိုးကြတာပဲ။ “ကျနော်ပြောရင်း မ… မောင့်ကို အဲ့ဒီဗွီဒီယိုထဲကလိုလုပ်ပေးလေ။ အသန်းလဲ ခေါင်းလေးညိမ့်ရှာတယ်။
ကျနော်လဲ အဝတ်အစားတွေချွတ်ပီး ဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေတုန်း အသန်းဟာ ကျနော့်ရှေ့ ဒူးပဆစ်တုပ်ထိုင်ရင်း ကျနော့်လီးကို မှုတ်ပေးတယ်။ ကြည့်စမ်း အသန်းဟာ မှတ်ဉာဏ်တအားကောင်းတာပဲ။ ကျနော့်လီကို ဗွီဒီယိုထဲက အမျိုးသမီးကြီးအတိုင်း လီးထိပ်နဲ့လီးဒစ်တွေကို သူမလျှာလေးနဲ့ လိပ်လိပ်ပီး ပလွေမှုတ်ပေးနေတယ်။ တခါတခါ ကျနော် ကိုယ့်ခန္ဓာမြောက်တက်သွားပြီး ၁၅ မိနစ်အကြာမှာ ကျနော့်သုတ်ရည်တွေဟာ အသန်းအာခေါင်ထဲပန်းထုတ်လိုက်တယ်။ ပထမတော့ အသန်းဟာ မျက်လုံးပြူးပြီး ကျနော်ကိုမော့ကြည့်တော့ “မ ကျနော့်သုတ်ရည်တွေမြိုချလိုက်။ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုမှ” အသန်းဟာ မျက်စိမှိတ်ပြီး ကျနော့်သုတ်ရည်တွေကို မြိုချလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဟာ အသန်းအင်္ကျီကိုချွတ်ပေးရင်း အသန်းကို ဆိုဖာရှည်ပေါ်လှဲသိပ်လိုက်တယ်။ အသန်းရဲ့ ခြေထောက်တချောင်းကို ဆိုဖာလက်တန်းပေါ်တင်. အခြားခြေထောက်တချောင်းကို ဆိုဖာဘေးတွဲလောင်းချလိုက်တယ်။ ဒီနောက် ကျနော်ဟာ ဝမ်းရားမှောက်ပြီး အသန်းစောက်ဖုတ်လေးကို ဘာဂျာပေးနေတယ်။ အသန်းစောက်စိလေးကို လျှာနဲ့ကလိလိုက်. တခါတခါလက်ကလေးနဲ့ဖြဲပီး စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကို လျှာနဲ့အလျားလိုက် လျက်ပေးနေမိတယ်။
မကြာခင် အသန်းဖင်လေး ကော့ကော့တက်လာရင်း ပါးစပ်ကလဲ “ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ်။ မ နှစ်ခါတောင်ပြီးသွားပြီ” ပြောပီးချိန် အသန်းစောက်ဖုတ်ထဲက စောက်ရည်တွေစီးကျလာတော့ ကျနော်ဟာ လျှာလေးနဲ့ သိမ်းလျက်ရင်း အသန်းစောက်ရည်တွေကို မြိုချလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်နဲ့အသန်းဟာ ဧည့်ခန်းဆိုဖာရှည်ပေါ် တညလုံးလိုးဖြစ်ကြတယ်။ မနက်လေးနာရီရောက်မှ အလိုးရပ်ပီး ကျနော်ဟာ မသန်းစောက်ဖုတ်လေးထဲ ကျနော့်လီးကြီးဆိမ်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်။ မနက်၆နာရီမှာ နှစ်ယောက်သားနိုးလာပြီး ဧည့်ခန်းထဲကပစ္စည်းတွေ ရှင်းလင်းပီး နှစ်ယောက်အတူ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး ထပ်လိုးကြပြန်တယ်။ ရေချိုးအပြီး အခန်းထဲကအထွက် အသန်းဟာ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ရင်း “မောင် မ’နဲ့ နေတိုင်းလိုးကြမယ်နော်”တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်အဝတ်စားလဲပြီး အသန်းအခန်းထဲဝင်ပြီး “မ ရော့။ ဒီဆေးကဒ်ထဲက ဆေးနှစ်လုံး ခဏနေရင်သောက်လိုက်အုံး” ဆိုတော့ အသန်းက “မောင် အဲ့ဒါဘာဆေးလဲ” ကျနော်က မ’ ဒါ အီးဇီးတူး လို့ခေါ်တယ်။ မနဲ့မောင်လိုးပြီး ၇၂နာရိ အတွင်း မ’ဒီဆေးသောက်ရင် ဗိုက်မကြီးတော့ဘူး။ ဆိုတော့ “ဟင် ဒါဆို မောင်နဲ့မ မယူဘဲနဲ့လဲ တသက်လုံးလိုးလို့ရတာပေါ့နော်” ဆိုပြီး အသန်းဟာ ဆေးကဒ်ထဲက ဆေး၂လုံးကိုဖောက်ပီး ပါးစပ်ထဲပစ်ထည့်လိုက်ရင်း အနီးကရေဘူးကို ယူပြီးသောက်ချလိုက်တယ်။ တဆက်ထဲမှာပဲ “မောင် … မကို မယူလဲ မောင့်တသက် မကိုလိုးပေးပါနော်”တဲ့။ပြီး…..